Ary nanan'anaka indray ravehivavy ka nitera-bavy. Dia hoy Jehovah taminy: Ataovy Lô-rohama* no anarany; fa tsy hamindra fo amin'ny taranak'Isiraely intsony Aho, eny, tsy havelako mihitsy ny helony**.[*Lô-rohama = Tsy namindrana fo][**Na: hofoanako avokoa ny ananany]
Ary rehefa notazana Lô-rohama, dia nanan'anaka indray reniny ka nitera-dahy.
Dia hoy Jehovah: Ataovy Lô-amy* no anarany; fa ianareo tsy oloko, ary Izaho tsy ho Andriamanitrareo**.[*Lô-amy = Tsy oloko][**Heb. tsy ho anareo]